Chikumi 12, 2020 na Nhungamiro Yedzidziso Siya Revo
1 How kushandisa facetime musi iPad – Download facetime paiPad facetime musi iPad kwete kushanda
2 FaceTime pamusoro iPad:
3 Ultimate Guide Kutanga FaceTime musi iPad:
4 Vhura pana Face Time Feature pamusoro Your I Pad:
5 Shandisa Face Time Call On iPad:
5.1 Click on Face Time kuvake:
5.1.1 Tsvaka Your Rinodiwa Contact:
6 Contact mashoko Panel
6.0.1 Isa vhidhiyo kana Audio kudanwa pamwe yasarudzwa kuonana:
6.1 Zvakawanda kubva pasiti yangu
How kushandisa facetime musi iPad – Download facetime paiPad facetime musi iPad kwete kushanda
Apple agara akauya zvakanakisisa makasitoma ayo. It kwakaramba kusimbisa vomurova Apps avo kana Software kuti anogona kuunza mufaro uye kurerukirwa kuti vatengi ayo. Matambudziko evanhu zvinobudisa nhau zvikuru yakakura.
Download facetime paiPad
facetime Download paiPad
facetime nokuti apuro iPad
facetime Android kuti Ipad
facetime App paiPad Download
Vanhu ose zera vanoda kugara chokuita mumwe. For chinangwa ichi, Apple zvikuru vakagadzirawo nakisisa videotelephony App anoziva sezvo FaceTime nokuda makasitoma ayo.
Anwendung iyi inorapa akagadzirirwa vose Apple vanoshandisa uchishandisa iPhone, Mac, iPod, uye iPad. Pakati zvose mamwe mano Apple, vanhu vanoda kushandisa iPad. vakwanise chidzitiro kwayo uye yakanaka yepamusoro mugumisiro kubvumira vatengi kunakidzwa mamiriro ayo uye Apps zvinoshamisa sezvo zvichienzaniswa nemamwe mano.
Unogona kushandisa FaceTime musi iPad kuti vakwanise kuona kwenyu paIndaneti. Nyaya ino vachakuudza zvakadzama kukosha, kudhanilodha, kugadzwa, kushandiswa, uye zviri Face Nguva iPad.
FaceTime chinhu chinoshamisa vhidhiyo uye Audio kudanwa App kuti pakutanga akasikwa kuti iPhone4, asi yakakwirira kudiwa akamanikidza Apple kuti dziripo iPad vanoshandisa uyewo. iPad anokupa-siyana asi chimwe chinonyanya kukwezva zvinhu ndechokuti unogona kuisa vhidhiyo kana makaseti zvinoda kuburikidza FaceTime nyore.
Unogona kushandisa Face Time kuti interconnected nemumwe anoishandisa ane iPad pamwe Mac Os 10.6.6 kana akazotevera neshanduro. Unongofanira kuwana kuti munhu kuburikidza yayo Apple Id. Vhidhiyo uye makaseti zvinoda kuburikidza FaceTime ndiwo emavambo vakasununguka. Unogona kushandisa kwako Indaneti kubatana kana cellular Data kutanga vakagovera foni.
FaceTime pamusoro iPad:
FaceTime App chaizvoizvo aronga kuti iOS vanoshandisa kusanganisira iPhone, iPads, iPods, uye Mac. Anwendung Izvi zvinobvumira kuti ugare uchiziva kana uri kure nemhuri yako, shamwari, bhizimisi, uye vashandi.
Kana uri kutsvaka kushandisa videotelephony ichi chikuru Anwendung musi iPad wako, zvino musafunganya haumanikidzwe kuita chinhu. Apple akatogadza ari FaceTime App pamusoro iPads dzako.
Unongofanira kuva yako Apple ID kuita Activate ichi pre-yakaiswa FaceTime app pamusoro iPads dzako. Izvi zvinofanira kuva dzinonakidza kuti muzive kuti kamwe une iPad wako, iwe vagadzirira yepamusoro vhidhiyo kana makaseti zvinoda kuburikidza FaceTime pasina chero hassles kana refu chirongwa kudhanilodha.
Achibatsirwa FaceTime pamusoro iPads, unogona nyore kuita kana kugamuchira risingaperi mavhidhiyo uye zvakarekodhwa zvinoda. Sezvo Anwendung uyu iOS vanoshandisa chete, saka unogona chete kuita vhidhiyo kana nvidia panodana avo vanoshandisa vari kushandisa iPhone, Mac, iPod, uye iPad namano. Unogona kuisa kushevedzera iPad vanoshandisa zvakananga nokushandisa kwavo tsambambozha ID iri yemanyorero rinowanika nokudyidzana mazita.
FaceTime musi iPad
Ultimate Guide Kutanga FaceTime musi iPad:
iPad 2 kana gare gare ane kamera mu-akavaka kuti hwezvekukurukurirana kuti kuitisa vhidhiyo anodana kuburikidza FaceTime. Izvi dyidzana Anwendung rakanzi ukataura vadiwa vako kana uri pa kure navo.
Face Time kuburikidza iPad anokupa zvose vakakurumbira zvinhu asi hamugoni kugadzirisa inzwi wayo Anwendung uyewo haugoni kuita zvokurekodhwa kwenyu mavhidhiyo dzaidirana. asi zvakadaro, rinopa zvose zvimwe zvinhu zvinoita kwikwidzana kushandisa.
Vhura pana Face Time Feature pamusoro Your I Pad:
Chinonyanya kukosha ndechokuti, asati kushandisa Face Time mu iPads dzenyu, nechokwadi kuti ndimi makadzosazve pamusoro pre-akagadza Face Time dzinoti, unogona kuita izvi:
Enda panovira Muterere iyo inowanikwa iri Home Page pamusoro iPad wako.
ndokubva, tinya Face Time dzinoti kuti aridzorere Activate.
Unogona zvakare kutevera chete muitiro kana uchida vanomboenda kudzima chinowanika kubva iPad wako.
In panovira menu iPad wako, unogona kusarudza mazita vokukurukura zvose kuti unoda chokuita kuburikidza FaceTime. Unogona kuita izvi kuburikidza yaakasarudza kwavo e-mail kero uye runhare Nhoroondo.
Shandisa Face Time Call On iPad:
Unogona chete isa panodana kuburikidza FaceTime wako dzimwe Apple mudziyo vanoshandisa. Izvi zvinoreva kuti unogona kuti interlinked kuburikidza Face Time nevamwe vanoshandisa vari kushandisa
iPad 2 kana gare gare, kana
Mac achimhanya Os X 10.6.6 kana
iPhone4 kana pashure kana
Wechina-chizvarwa iPod touch kana gare gare
Usati kudana chero Apple mudziyo vanoshandisa, nechokwadi kuti makawedzera kwaari iPad vokukurukura. Achiisa vhidhiyo kana Audio kudanwa kuburikidza iPad wako awfully nyore. Unongofanira kutevera tsoka shoma kusanganisira.
Click on Face Time kuvake:
Sezvakakurukurwa munyaya yapfuura, Face Time munhu pre-yakaiswa kuchiitwa pamusoro iPads dzako. Unogona kuwana ayo Icon nyore pamusoro musha chinovhara iPads dzenyu. Pauchapinda tinya Face Time kuvake, zvichaita kukukumbirai kupa runodiwa date.
You inofungidzirwa kupinda E-mail ID uye nhamba dzenhare naye uchida kutanga kukurukura. Mushure kusvika zvaida kuonana, unotofanira tinya bhatani inotevera.
Tsvaka Your Rinodiwa Contact:
On huru chinovhara wenyu FaceTime Anwendung, uchawana mazita vokukurukura kuti achaonekwa kurudyi rutivi chinovhara yako. Kana uchawana nhoroondo imwe rokushandisa kuti unoda kubata, chete tinya wake zita.
By nekudzvanya zita rake, unogona kuwana zvose zvinokosha mashoko kuti mushandisi yacho. The Pamazita anoratidza nhamba yacho musha, Mobile nhamba, kero ye email nedzimwe nzira yakafanana mugove kuonana, kuwedzera vaaida uye kuvhara vandine ichi. (aactivationcard)
Contact mashoko Panel
Isa vhidhiyo kana Audio kudanwa pamwe yasarudzwa kuonana:
Kamwe iwe kuchasvika ruzivo kuti chaiyo User, unotofanira yokuchengetera ake kana nhamba yake kana Email- adhiresi. Unofanira chete kuchengeta mashoko riri Inter-chokuita Face Time.
Pashure yaunonyanya kushandisa of zvaida mashoko, unotofanira tinya bhatani nezvevhidhiyo kana Audio kufona. Uye vanogona mumwe watinoda zvikuru mavhidhiyo kushevedza rubatsiro munyika.
Nokudaro Ndizvo mashoko kunokubatsira kutanga uye kuita FaceTime pamusoro iPad inova nyore kuita woga. Ndinovimba mashoko akakubatsira batanidza neshamwari dzako uye mhuri. Do share with your friends and families so that they can also know the use of Face Time on iPad.